Umdwebo kanye neComic Postgraduate e-ELISAVA | Izincwadi Zamanje
I-Postgraduate ku-Illustration ne-Comic e-ELISAVA
U-ELISAVA wethula isifundo sokuqala esifaka umfanekiso kanye namahlaya.
- UMery Cuesta noJosé Luis Merino basichazela ukuthi uhlelo luzihlola kanjani lezi zilimi zobuciko kuzo zonke izindawo zabo, bephula izindlela zendabuko ekwethulweni ngoSepthemba 19.
- Uhlelo lwe-postgraduate, oluhambisana nezinhlobo ezintsha zemboni nezobuchwepheshe, lubamba iqhaza kuka-Alex Trochut, Brosmind, Miguel Gallardo noma indlu yokushicilela iBlackie Books, phakathi kwabanye ochwepheshe abaziwayo kwezokudweba imidwebo, i-cinema noma ubuciko besimanje.
Ingqungquthela yokwethula: Kuleli qophelo: Umfanekiso kanye namahlaya kumongo wamanje
Usuku: ULwesine, Septhemba 19 ngo-19: 30 kusihlwa · Indawo: ELISAVA (La Rambla 32-XNUMX) · Umsebenzi: uvulekile futhi mahhala
I-ELISAVA School of Design and Engineering yaseBarcelona yethula uhlelo lokuqala lohlelo oluxubanisa imidwebo namakhomikhi okokuqala ngqa, luhlola izilimi zabo kuyo yonke imikhakha yabo yokudala futhi luphula amaphethini wendabuko ukuzivumelanisa nezinhlobo ezintsha ze imboni kanye nobuchwepheshe obusha.
Ngesikhathi sesethulo, esizokwenzeka ngoLwesine oluzayo, Septhemba 19 e-ELISAVA, abaqondisi uMery Cuesta noJosé Luis Merino bazokhuluma ngezimpawu zomsebenzi wabadwebi bezithombe nabadwebi bamakhathuni ngokusebenzisa izibalo ezintathu ezifanele kulo mkhakha kanye nomthelela womsebenzi wabo. Umcimbi, ovulelekile futhi okhululekile, uzosakazwa esiteshini sokusakaza seSikole.
Le degree yokuthweswa iziqu, eneziqu ezivela ePompeu Fabra University (UPF), idlulela ngale kwephepha ukugxila ekukhathazekeni komkhakha ngekhulu lama-XNUMX: kusukela ekusetshenzisweni kwemidiya yedijithali (i-webapps, amaphilisi ...) kuya ekwandisweni kwamasiko ukusetshenziswa kwemikhiqizo ehlobene nokubonisa okucacile (ama-tattoos, imifekethiso, amathoyizi, njll.). IPostgraduate izophenya ngobuhle, okhiye nobuchwepheshe bomkhakha ngokusebenzisa amaphrojekthi wangempela athuthukiswe ngokubambisana nezinkampani ezinjengeBlackie Books, iMongolia Magazine noma iTime Out.
Isifundo sithuthukisa amanani nomkhiqizo womuntu ngamunye womfundi ngendlela esebenzisekayo neyethiyori, ngokuya ngesipiliyoni. Ngalokhu bazoba nobuchwepheshe kanye nolwazi lwezibalo ezihlonishwa umhlaba wonke ezifana no-Alex Trochut, Brosmind, Miguel Gallardo noma uSergio Mora.
Iphosta yochwepheshe, yomkhondo owaziwayo kazwelonke nowamazwe omhlaba, ophendula isidingo sokunikeza ulwazi namathuluzi adingekayo kubo bonke labo ababambiqhaza abacabanga ukuthola indlela yabo kumfanekiso wamanje nakumahlaya.
I-Postgraduate Diploma in Illustration and Comics
I-1 edition: kusuka ngo-Okthoba 2013 kuya kuFebhuwari 2014
Izikweletu ze-ECTS: 30
Isiqu: I-Postgraduate Diploma in Illustration and Comics, iziqu ezikhishwe yiPompeu Fabra University (UPF) kanye ne-ELISAVA Barcelona School of Design and Engineering.
Amahora: NgoMsombuluko, ngoLwesibili nangoLwesine, kusukela ngo-17: 21.15 ntambama kuya ku-XNUMX: XNUMX ntambama
Iziqu ze-postgraduate zinikeza okhiye bokuthuthuka kule panorama entsha, kusatshalaliswa inethiwekhi yebhizinisi (amaklayenti, abamele, abanikazi begalari ...) emkhakheni ohlobene nezilimi ezicacile. Lezi zixhumanisi zihambisana nochungechunge lwemihlangano nochwepheshe bamanye amazwe abakhuthele kulo mkhakha.
Umgxeki wobuciko, umphathi ozimele nomculi wencwadi yamahlaya. IBachelor of Fine Arts and Master in Communication and Art Criticism evela eNyuvesi yaseGirona. Owine iPremi Espais 2002 yabaGxeki Bezobuciko. Uhlanganisa ukusebenzisana kwakhe okuvamile njengomhlaziyi wobuciko kwisengezo seCultura / s seLa Vanguardia, nama-athikili nemichilo yamahlaya yokunye ukushicilelwa kanye nama-fanzines, ukubonakala kwethelevishini nokubonakala okuvamile komsakazo. Njengomphathi, amaphrojekthi akhe akhuluma ngezinkinga ezihlobene nokuhlaziywa kwesiko elidumile, egxile kakhulu kumahlaya nokudweba. Amaphrojekthi akhe akamuva kakhulu yiQuinquis de los 80: cine, prensa y calle (CCCB, La Casa Encendida no-AlhóndigaBilbao), Cervantes 'Left Hand (Instituto Cervantes Istanbul) noma Ihlaya Elingenangqondo: Isimo sengqondo ngempilo ezimweni ezibucayi (i-Artium). Unamahlaya amabili emakethe "Fall and Rise of Antxon Amorrortu", kanye ne- "Istanbul Zombi 2066". Udweba izincwadi ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-TMEO, iMongolia neBonArt.
UJOSÉ LUIS MERINO
Wathweswa iziqu ku-Design ngu-Eina. Ngo-1985 waqala ukusebenza njengomqambi wezithombe kuma-studio ahlukahlukene nakuma-ejensi wokukhangisa kwaze kwaba ngu-1998, unyaka lapho azimela khona ukuthola i-graphic design yakhe kanye ne-studio yezithombe. Amaklayenti ayo afaka iBMW, BMW, iDoyle & Partners, i-Elle Germany, i-Elle Decor UK, iForbes, iFreixenet, uHarper Collins, iLa Vanguardia, iLondon Sunday Telegraph, iLos Angeles Time Magazine, uMadame Figaro Japan, iPlaneta, i-Playboy USA, iRitz- Carlton, ISan Miguel, The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post Magazine, njll.
Imisebenzi yakhe iklonyelisiwe futhi yashicilelwa ezincwadini zeminyaka zemincintiswano efana neThe AOI, American Illutration, Archive, Communication Arts, D & AD, Premis Junceda, Premis Laus, The Art Directors Club of Europe and SND. Izithombe zakhe zishicilelwe nasezincwadini ezithi Illustration Now ngumshicileli waseTaschen kanye nezingu-200 Best Illustrators ezibhalwe uLürzer's Archive. Njengomdwebi wezithombe, umelwa umhlaba wonke yi-Kate Larkworthy ejensi eNew York kanye ne-Eye Candy ejensi eLondon.
USilvia Brenes, ELISAVA Cindezela
premsa@elisava.net 93 317 47 15 www.izamela.net
Imininingwane engaphezulu - I-Crash Comic 2009
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » I-Postgraduate ku-Illustration ne-Comic e-ELISAVA
Okthoba 2013 Imincintiswano Yezinkondlo
Izintshisekelo zemibhalo ezizokumangaza